ABAGCINI BEGLASS 3 TRAILER, INEW VILLAIN, AMATHUBA, ULINDELO OLUNOMDLA KUNYE NAMATHUBA AMANGALISAYO - IIMUVI
Guardians Of The Galaxy Volume 2 wakhululwa emva ngo 2017. Emva koko, Guardians walwa wafa (ngaphandle Rocket kunye
Abagcini beGalaxy IVolumu yesi-2 yakhutshwa emva ngo-2017. Emva koko, abaGadli balwa basweleka (ngaphandle kweRocket ne-Nebula) kwi-Infinity War. Abo baswelekileyo bavuka kwaye baphinda balwa eAvengers Endgame. Emva koko, i-Guardians kunye no-Thor bangena kumnyele. Ngoku abalandeli beMarvel balinde ngolangazelelo ifilimu yesithathu yeGalari yeGlass, kwaye yonke into iwela kumbhali nakumlawuli kaJames Gunn.
Uhambo lwefilimu kunye nemveliso ukuza kuthi ga ngoku -
Kwi-2018, iMarvel Studios yamgxotha uJames Gunn emva kokuba i-tweets yakhe elishumi idalile kwakhona. Iitweets yayingamancoko kwi-pedophilia kunye nokuxhatshazwa. Oku kukhokelele ekubeni uMarvel aqhawule onke amakhonkco kunye noGunn kunye nokubeka ukuveliswa koMqulu 3 Umbuzo. UDave Bautista (obonisa uDrax kwiimuvi) naye wayesongele ngokuphuma ukuba uGunn akabuyiswanga. Abaxhasi beWarner Bros kunye neDC bangena ngaphakathi kwaye baqesha uGunn ukuba enze okulandelayo kwiQela lokuzibulala lika-2016, iQela lokuzibulala aligqibe kulo nyaka.
Abalandeli, abagxeki kunye neendaba ezininzi kunye neendawo kwihlabathi lonke bagxeka iDisney kunye neMarvel Studios ngesi sigqibo. I-Marvel Studios yaphinda yaphinda yamvuselela uGunn emva kweenyanga zokuxoxa ngeDisney. I-Guardians Of I-Galaxy Vol 3 iya kuthi iqale ukuvelisa ngo-2021.
Liya kuba yintoni ibali lefilimu?
Kwimeko yasemva kwekhredithi yeVolumu 2, uAyesha wenza into entsha engeyiyo ethiwa amagama, nguAdam. Uceba kwakhona ukusebenzisa uAdam ukutshabalalisa abagcini. U-Ayesha ukwatsho ukuba uAdam linyathelo elilandelayo lokuvela kohlanga loMongami. Oku kubonisa ukuba uAdam Warlock unokuba ngoyena mntu ukhohlakeleyo kwi Umqulu 3 okanye unokubonakala kwenye ifilimu eMarvel.
Ngokwamabali ahlekisayo aseMarvel, uAdam Warlock wabonakala okokuqala kwiNkulumbuso yokuqala yeMarvel # 1 ngo-Epreli 1972. Unamandla angaphaya kwawomntu, isantya kunye nokuzinza Ukwanamandla amakhulu, ubungqongqo nokungafi. Abagcini baya kuba nomceli mngeni omkhulu ekujonganeni nawo ukuba uAdam Warlock uza kuvela kwifilimu elandelayo!
Ayisiyiyo nje uAdam Warlock, ifilimu inokujolisa kuPeter Quill aka Star-Lord njengoko eqhubeka nokukhangela uGamora. Kuya kuba yinto enomdla ukubona iTro kunye nabaGcini kunye neengxoxo zakhe noQuill njengoko kwaqala ukungqinwa Endgame.
Iintloko ezinqunyulwe iintloko -
Yazi apho intloko isikiweyo yendalo yasezulwini yamandulo. Ikomkhulu lomqokeleli likwakhona. Kwifilimu yokuqala yeGuardians Of The Galaxy, iTivan Corporation yayisombiwa kwintloko yabantu abangasekhoyo beCelestial ngenxa yezicubu kunye nezinye izinto zeselula ukuba bazithengise kwintengiso emnyama. Into enomdla kukuba, cocoon ka-Adam Warlock yayikho nalapho kwingqokelela yoMqokeleli wezinto zakudala. Imvelaphi ka-Knowhere ayisaziwa, kwaye uninzi alusazi malunga nendlela i-Celestial yanqunyulwa ngayo intloko.
Uya kukhupha nini uMqulu 3?
Kwakukholelwa ukuba uMqulu 3 uya kuba yifilimu yokuqala Isigaba sesine seMCU . Kodwa loo nto yatshintshwa, kwaye ngoku umboniso wokuqala weSigaba sesine nguMhlolokazi Omnyama ngelixa ifilimu yokugqibela inguGqirha Strange kwiMultverse of Madness. IVolumu 3 iya kuba yinxalenye yesigaba sesihlanu se-MCU. Ngelishwa, nangona kunjalo, iDisney kunye Ukumangaliswa akuzange kubhengeze umhla wokukhutshwa kwifilimu okwangoku.
UJames Gunn ugqibe iqela lokuzibulala leDC. Oku kuthetha ukuba ukugxila kwakhe ngoku kuya kuba kwiGaldi yeGlass Vol 3. Ngelixa esebenza kuyo, abalandeli baya kuhlala benesigaba se-4 esiya kuqala ngoMhlolokazi Omnyama ngo-2021! Ke abalandeli beMarvel, umboniso bhanyabhanya ngokuqinisekileyo uza kufika ke nibe nomonde kwaye ndiyathemba ukuba ifilimu izakulunga njengangaphambili!
Hlala ubukele ezinye uhlaziyo!
uthando yimfama ixesha 2 2021
akukho mdlalo, akukho xesha lobomi 2
nini umtoli isizini 7 ibe kwi hulu
oomama bokwenene beverly iinduli ixesha elitsha
umzingeli x umzingeli isiqendu sokugqibela
Ukukhutshwa kwamarhamncwa amnandi